Kônsily tao Tridentio - Wikipedia
Kônsily tao Tridentio
Ny Kônsily tao Trindentio na Kônsily tao Trento dia kônsily ekiomenikan'ny Fiangonana katôlika tamin'ny taonjato faha-16 izay natao hamaliana ny Refôrmasiona prôtestanta ka nanamafy ireo tenim-pinoana lehibe. Ny fanapahan-kevitry ny kônsily dia nohamafisin'ny papa Pio IV tamin'ny 26 Janoary 1564. Izany fanapahan-kevitra izany dia namaritra fitsipika mifehy ny Fiangonana katôlika izay nananan-kery hatramin'izay ka hatr'eo an-tenantenan' ny taonjato faha-20.
Io no kônsily ekiomenika fahasivy eken' ny Fiangonana katolika. Ny papa Paoly III no nampanao io kônsily io tamin'ny 22 Mey 1542 mba hamaliana ny fangatahan' i Martin Lotera tao amin' ny sehatry ny refôrmasiona prôtestanta, ka nanomboka tamin' ny 13 Desambra 1545 izany ary nifarana tamin' ny 4 Desambra 1563. Notanterahina nandritra ny valo ambin' ny folo taona ny fiatrehana ny kônsily ka fitondram-papa dimy nifandimby no mifanandrify amin' izany, dia i Paoly III, i Jolio III, i Marsely II, i Paoly IV ary i Pio IV. Tao amin' ny katedralin' i San Vigilio tao Tridentio no nanaovana azy, avy eo tao Bologne ary farany dia naverina tao Tridentio indray tao amin'ny fiangonana Santa Maria Maggiore.
Mba hamaliana ny hevitry ny Prôtestanta, ny kônsily dia nanamafy ny foto-pampianaram-pinoana ny amin' ny fahotana tamin'ny fototra izay nambara tamin' ny kônsily faha-16 tao Kartago (na Kartazy) tamin' ny taona 418. Izany koa dia nanamafy ny fanamarinana, ny fahefan' ny Baiboly, ireo sakramenta fito, ny fivavahana atao amin' ny olo-masina sy amin' ny sisan-javatra navelan' ny maty (relika) ary koa ny tenim-pinoana (dôgma) ny amin' ny transsobstansiasiona. Raha ny amin' ny fitsipi-pifehezana indray dia namorona ny seminera diôsezanina natokana hanofanana ny pretra izany kônsily izany.
Ny Kônsily tao Tridentio no isan' ny kônsily lehibe indrindra teo amin' ny tantaran' ny katôlisisma. Mampahatsiahy azy matetika ny Kônsily Vatikàna II (1962-1965). Teo anelanelan' ny Kônsily tao Tridentio sy ny Kônsily Vatikàna II dia tsy nisy afa-tsy kônsily iray, dia ny Kônsily Vatikàna I (1869-1870), izay namaritra ny tenim-pinoanan' ny tsy fetezan-dison'ny papa, nefa nitsahatra izany noho ny ady nifanaovan' ny Frantsay sy ny Alemàna tamin' ny taona 1870 sy ny fidiran' ny tafika italiana an-tsehatra izay naka ireo fari-panjakan' ny papa ho fehezin' i Italia.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Kônsily_tao_Tridentio&oldid=997669"
Dernière modification le 6 Oktobra 2020, à 21:59
Voaova farany tamin'ny 6 Oktobra 2020 amin'ny 21:59 ity pejy ity.